हुनेवाला बेहुलीलाई ४ दिनअघि टिप्परले कि’चेपछि प्रेमीले लेखे– नभुलेस् बूढी, म नि छिट्टै आउँछु ! - News20 Media
January 24, 2020 N20LeaveaComment on हुनेवाला बेहुलीलाई ४ दिनअघि टिप्परले कि’चेपछि प्रेमीले लेखे– नभुलेस् बूढी, म नि छिट्टै आउँछु !
एजेन्सी : अहिले सामाजिक संजालमा निकै चर्चा रहेकाे घ’टना हाे याे तडीको दशरथचन्द नगरपालिका– १ गुरूखोला स्थायी घर भई कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बस्दै आएकी रमिता भट्टको यही माघ १३ गते बैतडीकै प्रकाश टेरसँग विवाह हुँदै थियो । प्रकाश नेपाली सेनामा का’र्यरत छन्, रमिता महेन्द्रनगरस्थित डेरामा बसेकी थिइन् ।
ब्राह्मण परिवारकी छोरी रमितालाई क्षेत्री परिवारका प्रकाशले एक वर्षअघि नै भगाएका थिए, यद्यपि उनीहरूको विवाह भने भएको थिएन । विहेका लागि यही माघ १३ गतेको साइत जुरेको थियो ।
आफ्ना साथीभाइलाई कार्ड बाँ’ड्नका लागि बजारमा साइकलमा हिँडिरहेका बेला बिहीवार महेन्द्रनगर बजारमा टिप्परले ठ’क्कर दियो । रमिताको घ’टनास्थलमै मृ’त्यु भयो ।
आफ्नो जिन्दगीको नयाँ अध्याय शुरू गर्न नपाउँदै रमिताले संसार छाडिन् । आफैंले बाँडेका कार्डका निम्तालुलाई विवाह समारोहमा सहभागी हुने अवसर दिन पनि पाइनन् । रमिताले छा’डेर गएपछि प्रकाश भावविह्वल छन् । उनले फेसबूकमा मर्मस्पर्शी स्टाटस लेखेका छन् ।
तेरो लागि रातो साडी ल्याइदिएको छु नि बूढी ! पर्सि हाम्रो बिहे हो, कहाँ गा’छस् छिटो आइज न । मेरो एक चिम्टी सिन्दुरको लागि तैँले आफ्नो फ्यामिली, लाइफ स’ब छा’डेर मेरो साथ दिइस्, तर मलाई बीच मै छो’डेर किन गइस् भन् त ।
एक्लै यत्रो लामो बाटो कसरी हिँडु म ह’म् ? कति सपनाहरू थिए, तैँले किन धो’का दिइस् । मैले भनेको होइन तलाईं केही हुनुभन्दा पहिला म नै नरहुँ भनेर ? तँ अगाडि किन गइस् मलाई छाडेर ?
म एक्लै के गरौं, कहाँ जाऊँ भन् त ? आइज न बिहे गरौंला नि ! यो बिहेको साडीमा मेरो सिन्दुर तेरो सिउँदोमा हेर्ने सपना छ मेरो । म नि छिट्टै आउँछु तँ सँगै बूढी, नभुलेस् है मेरो वेट गरेस् । चखेवाको जोडी जस्तै थियो नि हाम्रो माया अब एक गएपछि अर्को आफैँ आउँछु ।